Ogaden News Agency (ONA) – Rajadi laga qabay Raisal wasaraha cusub ee Ethiopia oo dhamaatay
Rajadi laga qabay Raisal wasaraha cusub ee Ethiopia oo dhamaatay
Xayle Maaryan Dhesaalay oo ah Ra’sal wasaaraha cusub ee gumeysiga Ethiopia oo xilka ka dhaxlay kaligi taliyihii hore dhintay ayaa sheegay innuusan waxba ka badali doonin nidaamki iyo ahdaaftii uu ku dhaqmi jiray Males Zenawi. Arrintaas oo walaac ku abuurtay beesha Caalamka oo filaysay in isbadal ka dhaco Ethiopia iyaga oo u aaneyn jiray in Males Zenawi ahaa ninka dhibaatada ka wada Ethiopia iyo Geeska Africa balse dano ay ku qabeen ay u naas nuujin jireen.
Kaligi taliye Zenawi waxaa uu ka tagay taariikh madow oo uu ku xasuuqay shacabka Somalida Ogadeniya iyo shucuubta Ethiopia isaga oo xayiraad saaray hayadaha caalamiga ah iyo saxaafada Ethiopia. Arrimahaas ayaa keenay in xidhiidhka ay Ethiopia la laheyd beesha caalamka uu xummaado kadib markii warbixino aad u fool xun laga soo gudbiyay baadhitaanana lagu sameeya deeqaha Ethiopia lasiiyo oo sidii loogu talo galay loo hirgalin.
Dhimashada Zenawia ayaa abuurtay albaab cusub oo hidi diilo ay ree galbeedku ku rajeynayaan qofka cusub ee yimaada in wax uun isbadal sameyn doono. Waxaase isbadalkii ka horyimid oo sheegay in Xasuuqi iyo xanibaadi saarneyd haayadaha Caalamka iyo Saxaafada Ethiopia halkeedi ka ahaaneyso Ra’isal wasaaraha cusub ee Ethiopia oo isagu ah nin aan kasoo jeedin Qowmiyada Tigreega islamarkaasna ka amar qaata Saraakiisha tigreega oo ushan u dhiibtay.
Xaylemaryam ayaa qirtay in uusan aheyn ninka ka taliya meesha markii uu kulanka qaramada midboobay ka bixiyay qudbad isaga oo sheegay in dhaxalki zenawi uu yahay. markii horena waxaa keenay booskaas oo soo barbaariyay Males Zenawi oo booska kaga ilaashanayay xubno kale oo kamid ah TPLF oo uu u sheegay in caalamku aqoonsaneyn dowladisa hadii qowmiyada tigreega boos kasta loo dhiibo sidaas awged waxaa laga dhigay Xayle mariyum ku xigeenka Zenawi ahna wasiirka Arrimaha Dibada ee waqtigaas. Mudo dheer ayay ku qaadatay TPLF inay u gartaan in booski Zenawi lagu wareejiyo oo ay ku maamushaan isaga wadanka sidii markii horeba loogu maamushay. Sidaas awgeed wax isbadal ah oo dhanka maamulka ah oo ka dhacay Ethiopia ma jiro sida uu qiray Xaley maryum sida uu laftigiisuna uu qiray waa nin meesha lagu maamusho kaliya.
Ushaada Nin aad ka qaadan kartoayaa loo dhiibta
Qowmiyada Tigreega oo ciyaar wanaagsan u jilaysa beesha caalamka ayaa jagada ra’isal wasaaraha Ethiopia u dhiibatay nin aan kasoo jeedin qowmiyadaas oo ka mid ah dadka la cunsuriyeeyo ee awooda ku laheyn Ethiopia. Dad badan ayaa saadalinaya in iska hor imaad uu ka dhici doono loolan siyaasadeed ah oo loogu tartamo booska xayle maryam. Iyada oo ay bilaabatay bilowgi dhamaadki talada ay Woyanuhu ku amar ku taagleyn jireen oo lagalay waqti kala guur ah. Qowmiyad kastaana waxay isu diyaarisay in ay ka faa ideysato kala guurkaan. Tigreega laftigooda ayaa arrintan kasii gaashaantay oo ciidamo badan ku gadaamay wadanka oo idil iyaga oo geeyay ciidamo badan dhulka Ogaden oo ay cabsida ugu badan ka qabaan. Sidoo kale waxay ciidamo Tigree ah ku wareejiyeen gobolka Tigreega oo hadii lagu kala tago Ethiopia ay rabaan inay halkaas dhufeys ka galaan kuna dhawaqaan inay ka goosteen Ethiopiada kale.